नेपालका पूर्वउपराष्ट्रपति झा भारतीय भएको खुलासा ! [तथ्यसहित] – Rastriyapatrika
नेपालका पूर्वउपराष्ट्रपति झा भारतीय भएको खुलासा ! [तथ्यसहित]
काठमाडौं । नेपाललमा अहिले अगिकृतले राज्यका प्रमुख पदमा वस्न पाउँने कि नपाउँने ठुलो बहसको विषय बनेको छ । राजपा लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरुले अगिकृत नेपाली नागरिकलाई पनि राज्यको मुख्य पदमा जान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन । यो बिचमा अर्को गम्भिर खुलासा भएको छ । नेपाललका पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा भारतीय नागरिक भएको रहस्य खुलेको छ ।
मुलुकको संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक लगायत हुनलाई “वंशज” नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अंगीकृत नेपाली नागरिकले उल्लेखित पद नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा ती पदसहित मुख्यमन्त्री हुन वंशज नेपाली नागरिक हुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर भारतीय नागरिक झा संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी उपराष्ट्रपति बने रु त्यो रहस्यमय भएको छ ।
लामो समय मुलुकको न्यायालयमा रहनुभएका झा मुलुकको पहिलो उपराष्टपति भएका थिए । झा सर्वोच्व अदालतको न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन । संविधानसभामा उनले माओवादी पार्टीकी शान्ता श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा र एमालेकी लक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेर २०६५ सालमा उपराष्ट्रपति बनेका थिए । उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि झाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेपाली भाषामा शपथ गराउँदा उपाष्ट्रपति झाले त्यसलाई तत्कालै मौखिक रुपमा हिन्दीमा उच्चारण गरेर शपथ लिएका थिए । हिन्दीमा शपथ लिएपछि उनिमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्यो । झाको शपथविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन समेत भए । संविधानसभा बैठकमा समेत विरोध भयो । उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीमा शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिट परेपछि उपराष्ट्रपति पद निस्क्रिय हुन पुग्यो र विवाद सुल्झन २ वर्ष लाग्यो ।
झा उपराष्ट्रपति भएको २ वर्षपछि मैथिलीमा सपथ पुगेका थिए । त्यसपछि बल्ल उनको विवाद टुंगियो र उपराष्ट्रपति पदमा आसीन भयो । उपराष्ट्रपति बनेलगत्तै हिन्दीको लागि लामोसमय विवाद झेलेका झा अन्ततः भारतीय नागरिक नै रहेको रहस्य खुलेको छ । भारतको चर्चित अनलाइन मैबिहारी डटकम ले झा बिहारी नागरिक भएको उल्लेख गरेको छ । झाको जन्म बिहारको दरभंगास्थित गरौलमा भएको र पठनपाठन त्यहीँबाट शुरु भएको अनलाइनले लेखेको छ ।
मैबिहारी डटकमका अनुसार झाले मधुवनीबाट मेट्रिक परीक्षा पास गरेका हुन । त्यसपछि आरके कलेज पढे र बिहारबाट ग्रेजुएशन गरेर कानून पढ्नका लागि नेपाल आएका हुन । नेपालमा केही वर्ष पढेपछि थप अध्ययनको लागि उनी बेल्जियम पनि गएका थिए । बेल्जियमबाट फर्केर वकालत पेशामा सक्रिय उनि पछि न्यायाधीश भए । न्यायालयमा रहँदा देखि नै उनी भित्रभित्रै नेपालमा हिन्दी स्थापित गराउन सक्रिय समेत रहेको खुलेको छ ।
“परमानन्दका दाजु शंकर झा मिथिलांचलका बलिया पहलवान थिए जसले ठूलाठूला पहलवानलाई हराएर चर्चा कमाएका थिए” मैबिहारी डटकमले उल्लेख गरेको छ , “त्यसबेला उनको पहलवानीको चर्चा नेपालसम्म हुने गर्दथ्यो । तत्कालीन राजाले शंकर झाबाट प्रभावित भएर उनलाई आफ्नो दरबारमा बोलाए । त्यसपछि उनलाई सेनामा उच्च जिम्मेवारी दिइया । तत्कालिन शासकले उनलाई सप्तरीमा केही जमिन समेत उपलब्ध गराए।” झा परिवार त्यसबेला देखि नेपालमा बस्न थालेको हो । उनका भाइ अहिले पनि दरभंगामै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।